ကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်ကောင်းမွန်သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာစက်သည် All-automatic နှင့် food grade stainleses သံမဏိအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံဖြစ်သည်. ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်လိုအပ်ချက်များအရအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏မည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်ပရိုတိန်းနှင့်အခြားအာဟာရများကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်,အလိုအလျောက်ခြောက်သွေ့သောခွေးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာစက် / ပြုပြင်စက်သည်အသားကိုအသုံးပြုသည်,အစေ့,ပဲနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာအဖြစ်ပုံသဏ္withာန်သစ်ထုတ်လုပ်ရန်ကုန်ကြမ်းအဖြစ်ဖြစ်သည်, သူတို့ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစွာအသက်ရှင်ရန်ထူးခြားသောအရသာရှိသည်.
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစားအစာပြုပြင်ခြင်းသည်ခွေးများကိုအထောက်အကူပြုရန်လိုအပ်သောနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်, အမြင့်ဆုံးသောအာဟာရဆိုင်ရာအစားအစာတန်ဖိုးကိုရရှိရန်ကြောင်များနှင့်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ. တကယ်တော့, ဒါကြောင့်ကုန်ကြမ်းဖွဲ့စည်းမှုပြောင်းလဲနေတဲ့ကိုရည်ညွှန်းသည်, ပုံသဏ္.ာန်, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များသည်သူတို့၏အစာတောင့်များ၏တန်ဖိုးကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်နိုင်စေရန်အတွက်အာဟာရရှိသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာများ၏အချို့သောလက္ခဏာများ. အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အစာအာဟာရပြည့်ဝစွာနှင့်ဘေးကင်းစွာအသုံးပြုရန်သေချာစေရန်, အသုံးပြုတဲ့ကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုးဒီဂရီမှလုပ်ငန်းများ၌ရမည်ဖြစ်သည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာစက်ယန္တရားသည် All-automatic နှင့် food grade stainleses သံမဏိဖြစ်သည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ. ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်လိုအပ်ချက်အရအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏မည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုသင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်ပရိုတိန်းနှင့်အခြားအာဟာရတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်,အလိုအလျောက်ခြောက်သွေ့သောခွေးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာစက် / ပြုပြင်စက်သည်အသားကိုအသုံးပြုသည်,အစေ့,ပဲနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာအဖြစ်ပုံသဏ္withာန်သစ်ထုတ်လုပ်ရန်ကုန်ကြမ်းအဖြစ်ဖြစ်သည်, သူတို့ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစွာအသက်ရှင်ရန်ထူးခြားသောအရသာရှိသည်.
6) Flow ဇယား: ပစ္စည်း – ကြိတ်ခွဲ – ရောစပ်ခြင်း – လုံးလေးများပြုလုပ်ခြင်း – ခြောက်သွေ့ – အအေး – ရာသီ – ထုပ်ပိုး
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာ processing ၏ရေးဆွဲရေး
ဥပမာငါ: အမဲသား 20%, အမဲသားအရိုးမုန့်ညက် 20%, ကြက်သားမုန့်ညက် 8%, ပြောင်းဖူး 30%, ဂျုံ 15%, ကြက်ဥအနှစ်မုန့်ညက် 4%, ဟင်းနုနွယ်ရွက်မုန့်ညက် 2%, မုန်လာဥမုန့်ညက် 1.5%, ပန်းသီး 1.5%, မုန့် 1%, ထို့အပြင် 2% , ဆား 10g / kg
ဥပမာ II: ကြက်အမှုန့် 5%, ကြက်သားအသစ် 10%, အမဲသားအမှုန့် 10%, ဂျုံ 20%, Oats 10%, အသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ 10%, ငါးဆီ 3%, ဗီတာမင် 2%
ဥပမာ ၃: အမဲသား 15%, ကြက်သား 10%, ငါး 5%, ဘဲ 10%, ဆန်လုံးညို 20%, bean dregs 15%, အာလူး 10%, သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမှုန့် 10%, နို့မှုန့် 3%, ထို့အပြင် 2%